Pakistan: Ilaa 80 ku dhimatay qarax - BBC Somali - Warar
Pakistan: Ilaa 80 ku dhimatay qarax
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Febraayo, 2013, 10:37 GMT 13:37 SGA
Suuqa ayaa aad loo buuxay markii uu weerarka dhacay.
Gudoomiyaha gobolka Balochistan Nawab Zulfikar Magsi, ayaa ku eedeeyay masuuliyiinta ammaanka iyo sirdoonka inay ku guuldaraysteen ilaalinta ammaanka kadib markii Ilaa siddeetan qof ay ku dhinteen qarax bambaano oo ka dhacay Sabtidii suuq ku yaala magaalada Quetta.
Boliiska ayaa sheegay in qaraxa oo ay ku dhaawacmeen ilaa laba boqol oo qof lala beegsaday dadka Siicada. Kooxda Sunniyiinta mayalka adag Lashkar-e-Jhangvi ayaa sheegay inay ka danbayeen qaraxa.
Dadka qaraxu saameeyay ayaa isugu jiray dumar iyo caruur. Dadka Shiicada ayaa dhowr jeer weerar ay ku soo qaadeen Sunniyiinta mayalka adag.